Guddoomiyihii Degmada Marka iyo Taliyihii Saldhigga oo Xilkii laga Qaaday | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiyihii Degmada Marka iyo Taliyihii Saldhigga oo Xilkii laga Qaaday
Marka (KON) - Wararka naga soo gaaraya magaalada Marka ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in Guddoomiyihii Degmadaas iyo taliyihii saldhigga Boliiska Maanta xilkii laga qaaday.
Warka ayaa sheegaya in Kulan maanta ka dhacay Xarunta Gobolka Shabeelaha Hoose loogana hadlayay Xiisadihii dhawaanta ka jiray Magaalada Marka darteed in ay sababtay in Guddoomiyihii iyo Taliyihiiba Xilka laga qaado.
Cabdiraxmaan Cukaash Guddoomiyaha Degmada ayaa waxaa Khilaaf mudaba kala dhaxeeyay Guddoomiye ku xigeenka Degmada kaasoo sababay gacan ka hadal sababay Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
Kulanka mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka ay maanta ku yeesheen Xarunta Gobolka ayaa ahaa arrimahaas lagu lafa gurayay iyadoona isla kulankaas Guddoomiye loogu Magacabay Maxamuud Cusmaan Yariisow.
Guddoomiyihii hore ee Degmada marka oo saxaafaddu la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintaa isagoona sheegay inuusan haatan hadlayn diyaarna u ahayn inuu ka hadlo arrimaha ku aadan xil ka qaadista lagu sameeyay
Guddoomiyaha Degmada Marka iyo ku Xigeenkiisa ayaa indhawaalaba waxa u dhaxeeyay dagaal iyadoo midba midka kale ku eedeynayo inuu halis ku yahay Naftiisa ama isaga lagu soo duulay.
Wixii warar ah ee arrintaa ku soo kordhana waxaad kaga bogan doontaan wararkayaga danbe.